မြန်မာ – English | Danya Wadi
»မြန်မာ – English
ပထမဆုံးသောလွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့် ကြား ချက် (ဝန် ကြီး ချုပ် သ ခင်နု)
By danyawadi January 9, 2014 Leaveacomment
ယနေ့ရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာ လူတစုတည်းရဲ့လွတ်လပ်ရေး မဟုတ်။ဗမာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ရှမ်း၊ချင်း၊ကချင်၊ကရင်၊ကရင်နီ၊ရခိုင်၊မွန်-ဗမာအစ ရှိတဲ့၊ ဗမာ တိုင်းရင်းသူ တိုင်းရင်းသား သွေးချင်း သားချင်းအားလုံးတို့စည်းစည်းလုံးလုံး ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ရတဲ့လွတ် လပ်ရေး ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ယခုလွတ်လပ်ရေးဟာ-ရှမ်း၊ချင်း၊ကချင်၊ကရင်၊ကရင်နီ၊ရခိုင်၊မွန်-ဗမာ အစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသား သွေးချင်း သားချင်း အားလုံးရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖြစ် တယ်။ ယနေ့ရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာ-လူတန်းစား တစားတည်းရဲ့လွတ်လပ်ရေး မဟုတ်။ ဗမာတနိုင်ငံ လုံးမှာရှိကြတဲ့-လယ်သမား၊ အလုပ်သမား၊ဈေးသူ၊ဈေးသား၊ကျောင်းသူ ကျောင်းသား၊ အမှုထမ်းအရာထမ်းများမှ စ၍ တော်လှန်ရေးသမား များသို့တိုင်အောင် လူတန်းစားပေါင်း စုံက ညီညီညာညာ စွန့်စွန့်စားစားအုံကြွကာ-ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်၊ရရှိတဲ့လွတ် လပ်ရေးဖြစ် သဖြင့်။ယခုလွတ်လပ်ရေးဟာ-လယ်သမား၊ အလုပ်သမား ၊ ဈေးသူဈေးသား၊ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ အမှူထမ်းအရာထမ်းများ မှစ၍၊ တော်လှန်ရေးသမားများအထိ ပါဝင်သော လူတန်းစားအမျိုးမျိုးရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖြစ်တယ်။ ယနေ့ရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာ နိုင်ငံရေး တသင်း တဖွဲ့ တည်းရဲ့ လွတ်လပ်ရေးမဟုတ်။ […]
” ရေသန့် ဘူး နဲ့အမျိုးသမီး များ အတွက် အထူး သတိပြု ရ မည့် အ ချက်”
By danyawadi August 1, 2013 Leaveacomment
Thursday, August 01,2013 အလုံပိတ်ထားတဲ့ ကား ၊ ပိတ်လှောင်နေတဲ့ ကားထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ရေသန့် ဘူးများကိုအမျိုးသမီးများ သောက် သုံးဖို့ မ သင့်တော် ဘူး လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကားထဲက အပူဒဏ်နဲ့ရေသန့် ဘူးက ပလတ်စတစ် မှာ ပါတဲ့ ကယ်မီကယ် နဲ့ ဓာတ်ပြုပြီး dioxin ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Dioxin ဆိုတာ အမျိုးသမီးများ ရင်သားကင်ဆာကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဆိပ်ဓာတ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။Dioxin များဟာ မိမိတို့ ခန္တာကိုယ် ထဲက ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တစ်ရှူး အရေအတွက်ကို တိုးလာစေပါတယ်။ သို့ နှင့် ရင်သားကင်ဆာကို […]
By danyawadi April 15, 2012 Leaveacomment
မြန်မာ Dictionary မြန်မာ ကွန်ပျူတာ User များအတွက် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ၊ အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ အဘိဓာန်ဆော့ဝ်ကောင်းလေးတစ်ခု ထွက်လာပါပြီ။ ဖန်တီးသူကတော့ ကိုစိုးမင်း။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ လူငယ်တစ်ဦး။ ခေါင်းစားဖော် ခေါင်းစားဖက် နောက်တစ်ယောက်က ကိုမင်းကျော်။ သူက ဆွီဒင်မှာ။ဖတ်စရာများစွာ ဗဟုသုတယူစရာများစွာ။ သူအားထုတ်မှုတွေလည်း အားကျစရာ …… ဒီနေရာမှာ ဖတ်လို့ရတယ် အများကောင်းကျိုးအတွက် ပေးဆပ်မှုတစ်ခုကို သူပြုခဲ့ပြီ။ ကိုစေတန်ဂေါ့ နှင့် ကျွန်တော်ကတော့ မိမိတို့စုထားသော ဒေတာများကို စေတနာဗရပွဖြင့် ထောက်ပံ့လိုက်ကြသည်။ အလွန်သုံး၍ကောင်းသော အဘိဓာန်ဖြစ်သည်။ အင်စတောလုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တစ်ခုရှာကြည့်သည်။ “စိုင်း” ဆိုတာ …. အောက်က ပုံအတိုင်းပေါ်လာသည်။ ကဲ ဘယ်လောက် …. လွယ်လဲ …….. […]
မြန်မာ – English – အဘိဓါန် (Zawgyi)
By danyawadi February 12, 20122Comments
မြန်မာ အမျိုးအစား အင်္ဂလိပ် ကကတိုး n fork-tailed catfish ကကတစ် n giant sea perch ကကြိုး n 1.hardness 2. music for dance ကကြိုးတန်ဆာ n caparison ကချေသည် n professional dancer ကစားကွက် n game tactic ကစားကွင်း n playground ကစားခုန်စား n spots and games ကစားစရာ n toy, playing thing ကစားစရာဆိုင် n toyshop ကစားဒိုင် n banker ကစားဖော် n […]